သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၃၂) ~ Htet Aung Kyaw
တပ်ရင်းပြန်ဆင်းပြီး ကော်မီတီတွေနဲ့ ဆွေးနွေးတော့ ဘိုင်သိန်းမြင့်တို့ တပ်ခွဲ ၂ ရှိရာ နတ်အိမ်တောင်ဒေသဆီ သွားပြီး အဲဒီမှာရှိတဲ့ ထိုင်းထောက်လှမ်းရေးကို အကူညီတောင်းရင် ကောင်းမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ထွက်လာပါတယ်။ ဘာလက်မှတ်မှ မရှိဘဲ ထိုင်းတဦးလို သရုပ်ဆောင်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ ဟိုဘက် ဒီဘက်ကိုဖြတ်ပြီး ခရီးသွားနေတဲ့ကျနော်ဟာ ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ အဲဒီအချိန်အထိ တခါမှ အဖမ်းမခံခဲ့ရသေးပါဘူး။ လိုင်းကားအဆင့်ဆင့်စီးပြီး နတ်အိမ်တောင် စခန်းဆီ ကျနော်ရောက်သွားတော့ အခြေအနေက အရင်လိုမဟုတ်တော့။ နတ်အိမ်တောင်စခန်းကို န၀တ က သိမ်းထားလိုက်ပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် နတ်အိမ်တောင်ရွာထဲမှာ ကျောင်းသားတွေအရင်လို ပေါ်ပေါ်တင်တင် နေလို့မရတော့ပါ။
နောက်တခါ န၀တစစ်သားတွေလည်း နတ်အိမ်တောင်ရွာထဲ မကြာခဏဆင်းလာပြီး ဈေးလာဝယ်နေတယ်လို့ သိရတဲ့အတွက် စိတ်ထဲမှာ သိပ်မလုံခြုံလှ။ ဒါပေမယ့် တပ်ခွဲမှူး ဘိုင်သိန်းမြင့် (၁၉၉၇ ပင်လယ်ပြင်တိုက်ပွဲအတွင်း ကျဆုံး) က သူ့နယ်ကို သူပိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အထာမျိုးနဲ့ အေးအေးဆေးဆေးနေပြနေတော့ ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ယူထားတဲ့ ကျနော်က စိုးရိမ်မှုပြနေလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ။ သူ့နယ်ကို သူပိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် အရင် နတ်အိမ်တောင်စခန်း မကျခင်က ကျနော်တို့ ၂၀၁ တပ်ရင်း ရုံးခန်းဖွင့်ခဲ့တဲ့ ၂ ထပ်တိုက်အိမ်ကြီး ဒေါ်ခင်ကြည်ရဲ့ အိမ်မှာတော့ ပေါ်တင်သွားမတည်းရဲတော့ပါ။ ဟိုဆိုင်ဒီဆိုင်ဝင်ပြီး လဖက်ရည်သောက်၊ ရွာသားတွေနဲ့ စကားပြော လုပ်နေပေမယ့် ကျနော်တို့ ဘယ်မှာတည်းသလဲ ဆိုတာကို မပြောရဲပါ။
နောက်တရက် မိုးလင်းတော့ ဘိုင်သိန်းမြင့်နဲ့ ကျနော်ဟာ စကားပြန်တဦးကိုခေါ်၊ နတ်အိမ်တောင်ရွာအ၀င်ဝ တောင်ကုန်းပေါ်ရှိ ထိုင်းထောက်လှမ်းရေး ရုံးခန်းဆီတက်ပြီး မာနယ်ပလောရောက် ရဲဘော်တွေ ပြန်ခေါ်ရေးကိစ္စ အကူညီပေးဖို့ တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ဟာ ကျနော်တို့နဲ့ အရင်းနှီးဆုံး၊ နားလည်မှုအရှိဆုံးလို့ ထင်ထားပေမယ့် ပြောင်းလဲသွားတဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေ၊ နယ်မြေစိုးမိုးမှု အခြေနေတွေအရ သူတို့တာဝန်ကျရာနယ်ဖြစ်တဲ့ ကန်ချနပူရီခရိုင်ကို ကျော်ပြီး လူ ၂၀ ကျော် သယ်ယူဖို့ကိစ္စဟာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သာ အဖြေရခဲ့ပါတယ်။
ဆွေးနွေးသမျှ အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ ကျနော်ဟာ စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ ထောက်လှမ်းရေးကုန်းပေါ်ကနေ ဆင်းလာပြီး အခြေနေတွေကို တပ်ရင်းဌာနချုပ်နဲ့ မာနယ်ပုလောက တပ်စုဆီ ကြေးနန်းပို့နိုင်ဖို့ ကျနော်တို့တပ်ခွဲ အခြေစိုက်ရာ လေးအိမ်စုရွာဆီ ဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့မှာ ကားမရှိ။ ကားလည်း မငှားနိုင်ပါ။ ဒီတော့ နတ်အိမ်တောင်ကနေ လေးအိမ်စုကိုသွားဖို့ ရေပူရွာဆီ ကားလမ်းအတိုင်း ကုန်ကြောင်းခရီး တနာရီလောက် နှင်လိုက်ရပါတယ်။ တောထဲမှာ လမ်းလျှောက်ရတာ ရိုးနေပြီဖြစ်ပေမယ့် ကတ္တရာလမ်းပေါ် တနာရီလောက် လမ်းလျှောက်နေရတာကိုတော့ စိတ်ထဲမှာ သိပ်မဘ၀င်မကျလှပါ။
ဒီလိုနဲ့ ရေပူရွာထိပ်ဆီ ရောက်လာပြီး ရွာနဘေးရှိ ကားလမ်းကြမ်းလေးအတိုင်း ၀င်လာတော့ ပထမဆုံး တွေ့ရတာက ၀ါးရုံတောထဲမှာ တပ်ဖျောက်ထားတဲ့ ကျောင်းသားတပ်ရင်း ၃ ခုရဲ့ ပူးတွဲကင်းပုန်းစခန်း။ အဲဒီမမြင်ရတဲ့ လုံခြုံရေးဂိတ်ကိုဖြတ်ပြီး ၀င်လာတော့ စမ်းချောင်းလေးတခုကို တွေ့ရပြီး အဲဒီချောင်းဘေးက တလုံးတည်းသော သွပ်မိုး၊ သစ်သားအိမ်ဟာ KNU တပ်ခွဲမှူး ဗိုလ်လှချော ယာယီနေတဲ့အိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူအိမ်ပေါ်တက်သွားတော့ ဗိုလ်လှချောက အိမ်မှာမရှိတဲ့အတွက် စကားပြောခွင့် မရလိုက်ပါဘူး။ သူ့အိမ်ကိုကျော်ပြီး ၁၀ မိနစ်လောက် ထပ်လျှောက်လိုက်တော့ သက်ကယ်မိုး ၀ါးတဲ ၁၀ တဲကျော် တွေ့ရပြီး အဲဒါဟာ “ဒီမိုကရေစီ ဒုက္ခသည်ကျေးရွာ” ဖြစ်ပါတယ်။
“ကျေးရွာ ဆေးပေးခန်း” ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ချိတ်ထားတဲ့ ၀ါးတဲတလုံးထဲ ၀င်လိုက်တော့ ဆေးမှူးတွေက ကျနော်တို့တပ်ရင်းနဲ့ ၁၀၁၊ ၁၀၂ ရဲဘော်တွေ။ လူနာတွေထဲမှာတော့ ငှက်ဖျားမိ ရဲဘော်တချို့နဲ့ ဒုက္ခသည်ကလေးငယ်တချို့။ ဆေးခန်းနဲ့ မျက်စောင်းထိုး တခြား တဲတလုံးမှာတော့ “ကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်း” ဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကို တွေ့ရပြီး ကျောင်းဆရာတွေထဲမှာ ကျနော်တို့ တပ်ရင်းက ရဲမေတဦးကုို လှမ်းမြင်လိုက်ရပါတယ်။ နောက် တဲတလုံးမှာတော့ ရွာဥက္ကဋ္ဌ ဦးရှိန် (အခု အမေရိကန်) တို့ မိသားစုကို တွေ့ရပြီး စကားထိုင်ပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်တရက်မိုးလင်းတော့ နတ်အိမ်တောင်အခြေစိုက် ခလရ ၂၀၈ ကနေ ၆၀ မမ လက်နက်ကြီးတလက်၊ လက်နက်ငယ် ၄ လက်နဲ့အတူ ကျနော်တို့ ABSDF တပ်တွေဆီ ဘက်ပြောင်းလာတဲ့ တပ်ကြပ်ကြီး တင်မြင့်ဦး (အခု ကနေဒါ) အပါအ၀င် ရဲဘော် ၅ ဦးကို ဘိုင်သိန်းမြင့်က ခေါ်လာပြီး ကျနော်နဲ့ ပေးတွေ့ပါတယ်။ ဒီလို ပူးပေါင်းနိုင်အောင် စည်းရုံးခဲ့သူကတော့ တပ်ခွဲမှူး ဘိုင်သိန်းမြင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကျနော်တို့ တပ်ရင်းအပြင် ABSDF တခုလုံးအတွက်ပါ လက်နက်ကြီးနဲ့အတူ လာရောက်ပူးပေါင်းတဲ့ ပထမဆုံး ရှားရှားပါးပါး န၀တ စစ်သည်တွေလို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။
အဲဒီအချိန် ကိုတင်မြင့်ဦးက အသက် ၃၀ ကျော်စပဲ ရှိပုံရသေးပြီး တပ်ကြပ်တဦး၊ ဒုတပ်ကြပ်တဦးနဲ့ ရဲဘော် ၂ ဦးဆိုရင် အသက် ၂၀ ၀န်းကျင် လူငယ်လေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကို အခုမှ ကျနော် လူချင်းတွေ့ဖူးပေမယ့် သူတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ သတင်းကိုတော့ မာနာပလောမှာ ရောက်နေစဉ်ကတည်းက ကြားခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ သူတို့ ၅ ဦးဟာ ကျနော်တို့ မာနယ်ပလော တိုက်ပွဲကာလအတွင်း နတ်အိမ်တောင်စခန်းကနေ ဘက်ပြောင်းလာသူတွေဖြစ်ပြီး အဲဒီကာလ ၁၀၂ မှ ဗဟိုခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူ ကိုဉာဏ်လင်းရွှေက သတင်းဌာနတွေဆီ ထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ ဘာကြောင့် ဘက်ပြောင်း ထွက်ပြေးလာသလဲဆိုတာကို မေးကြည့်တော့ အဓိကအားဖြင့် အပေါ်အောက် ခွဲခြားဆက်ဆံမှု၊ အထက်အရာရှိတွေရဲ့ အနိုင်ကျင့်မှုကို မခံနိုင်လို့ ထွက်လာတယ်လို့ ပြောတာကို ကျနော်အမှတ်ရနေပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ န၀တ တပ်တွင်းက အခြေနေကိုမေးမြန်း၊ သူတို့ ၅ ဦးကို အားပေးစကားပြော၊ မင်းသမီးခစန်းဆီ မကြာခင် ခေါ်ယူနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးမယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ တဆက်တည်းမှာပဲ ကိုတင်မြင့်ဦးတို့ ၅ ဦး ဘက်ပြောင်းလာအောင် စည်ရုံးနိုင်ခဲ့တဲ့ တပ်ခွဲမှူး ဘိုင်သိန်းမြင့်ကိုလည်း ချီးကျုးမိပါတယ်။
အဲဒီနောက်မှာတော့ နတ်အိမ်တောင်ဒေသဆီ လာရင်းကိစ္စ အဆင်မပြေသေးတဲ့အကြောင်း၊ စိတ်ရှည်သီးခံပြီး ဆက်စောင့်ဖို့ လိုတဲ့အကြောင်း မာနယ်ပလောရှိတပ်စုနဲ့ တပ်ရင်းဌာနချုပ်တွေဆီ ကြေးနန်းပို့ရပါတယ်။ နေ့လည်ပိုင်းမှာတော့ ဒုက္ခသည်စခန်းနောက်ကျော နယ်စပ်တောင်ကုန်းမှာ ယာယီတဲထိုး စခန်းချနေကြတဲ့ တပ်ခွဲ ၂ ရဲဘော်တွေဆီ သွားရောက် အားပေးစကားပြောခဲ့ပါတယ်။ နယ်စပ်တောင်ထိပ် ဆိုပေမယ့် နတ်အိမ်တောင်လိုတော့ မြင်ကွင်းက သိပ်မကောင်းတဲ့အပြင် နယ်စပ်ကုန် သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းလဲ မရှိပါ။ ရဲဘော်အများစုဟာ နတ်အိမ်တောင်ကို လွမ်းနေပုံရပြီး နတ်အိမ်တောင်ခစန်းကို ပြန်သိမ်းချင်တဲ့အကြောင်း ပြောနေကြပါတယ်။ ညနေပိုင်းမှာ လူစုပြီး “လက်ရှိနိုင်ငံရေး အခြေအနေ ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း” လုပ်ခဲ့သေးတယ်လို့ ထင်ပေမယ့် အသေးစိပ် မမှတ်မိတော့ပါ။
လေးအိမ်စုဒေသရှိ ဒီမိုကရေစီကျေးရွာ ဆေးပေးခန်းမှာ တွေ့ရတဲ့ ABSDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့
ဒီလိုနဲ့ ကျနော်ဟာ နတ်အိမ်တောင်နဲ့ လေးအိမ်စုမှာ သတင်းတပတ်ခန့် ကြာသွားခဲ့ပါတယ်။ မာနယ်ပလောတပ်စုကို သည်းခံပြီး ဆက်စောင့်ဖို့ ကြေးနန်းပို့ပြီး ပြောထားပေမယ့် ရဲဘော်တွေက စိတ်ရှည်သည်းခံနိုင်စွမ်း ရှိပုံမရတော့ပါ။ “ကိုယ်အစီစဉ်နဲ့ကိုယ် ပြန်လာတော့မယ်။ ခရီးစရိတ်နဲ့ လမ်းကြောင်းကိုသာ ဥက္ကဋ္ဌစီစဉ်ပေးပါ” ဆိုပြီး ကျနော်ဆီ ကြေးနန်းပြန်ဝင်လာပါတယ်။ ဒီကြေးနန်းကိုကြည့်ပြီး ထားဝယ်မှာခေတ်စားတဲ့ “ထားဝယ်သားအိမ်ပြန်” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သွားသတိရမိပါတယ်။
ထားဝယ်သားတွေ အိမ်ပြန်ချင်ရင် ဘယ်လိုမှတားမရ၊ ဆီးမရတော့ဘဲ မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ ရအောင့်ပြန်လေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီတော့ ကျနော်လည်း ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပါ။ မာနယ်ပုလော-စော်လဲထာ-မယ်စရီးယန်း-ဘန်ကောက်ကို လှေတဆင့်၊ လိုင်းကားတဆင့်၊ ဘတ်စကားတဆင့် ဘယ်လိုစီးရမယ်။ တစုကို လူ ၄ ဦးထက်မပိုစေဘဲ အုပ်စုခွဲသွားပါ။ စစ်ပစ္စည်းတွေ လုံးဝသယ်မလာမိစေပါနဲ့ စသဖြင့် ညွှန်ကြားချက်ကို စက်ပေါ်တက်ပြီး တခါတည်း ပြောလိုက်ရပါတယ်။
ပြီးတော့ ဘန်ကောက်မှာ လည်လည်ဝယ်ဝယ် သွားဖူးတဲ့ ရဲဘော်တဦးကို မင်းသမီးစခန်းကနေ ဘန်ကောက် အမြန်ဆုံးတက်ပြီး ဒီလူတွေကိုကြိုဆိုဖို့၊ နောက်တဦးက ဟွေးနန်းခေါင်ရှိ ဦးဟန်လင်းရဲ့အိမ်မှာ ကြိုဖို့ အရေးပေါ်ညွှန်ကြားမှုတွေ လုပ်လိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီကာလက ဦးဟန်လင်း မိသားစုဟာ ဟွေးနန်းခေါင်ရွာစပ်က ထိုင်းစိုက်ပျိုးရေးခြံတခုမှာ နေထိုင်ခွင့်ရထားပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ မာနယ်ပလောကနေ စောလဲထာကို လှေစီးပြီး နေ့လည်ချိန် အရောက်လာ၊ စောလဲထာကနေ မဲစရီယန်းကို ညနေကားမီအောင်စီး၊ ဘန်ကောက်-မော်ချစ်ကားဂိတ်ကို မနက်စောစော ရောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ စီမံကိန်းကို အကောင်ထည်ဖော်ပါတော့တယ်။ မယ်စရီးယန်းကနေလာတဲ့ ဘတ်စ်ကားဟာ ၁၀ နာရီဝန်းကျင်မှ ဘန်ကောက်-မော်ချစ်ကားဂိတ်ကို ရောက်တဲ့အတွက် အဲဒီကတဆင့် တောင်ပိုင်းကားဂိတ်ဆီသွားပြီး ကန်ချနပူရီကားကို စီးဖို့အချိန်က စကောစက ဖြစ်နေပါတယ်။ တခါ ကန်ချနပူရီ-ဟွေးနန်းခေါင် လိုင်းကားက နေ့လည် ၁ နာရီ ထွက်တဲ့အတွက် အဲဒီလိုင်းကားကို ဘယ်လိုမှ မမီနိုင်တော့ပါ။ ဒီတော့ ဘန်ကောက်မှာ တညတာအိပ်ဖို့ စခန်းထောက် ရှာရပါတော့တယ်။
ဘန်ကောက်မှာ ရုံးခွဲမရှိလို့ ခိုနားရာမရှိဖြစ်နေတဲ့ ကျနော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို အကြို-အပို့ လုပ်ပေးပြီး သူတို့အခန်းမှာ လက်ခံကျွေးမွေးပေးတဲ့ ဘုရားသုံးဆူဒေသက ABSDF ရဲဘော်ဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ ကိုချစ်ဘွယ်၊ ကိုယဉ်ထွေး၊ ကိုမျိုးအေးတို့ကို အမည်တပ်ပြီး ကျေးဇူးတင်သင့်တယ်လို့ ကျနော် ထင်မိပါတယ်။ တခေါက်မှာ လူ ၄ ဦးစီကို စက်လှေတဆင့်၊ လိုင်းကား တဆင့်၊ ဘတ်စကား ၃ ဆင့် လောက်နဲ့ မာနယ်ပလော-စောလဲထာ-မယ်စရီးယန်း-ဘန်ကောက်-ကန်ချနပူရီ-ဟွေးနန်းခေါင်-မင်းသမီး အထိ သယ်တဲ့၊ ဖြစ်သလို အရေးပေါ်စီစဉ်လိုက်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံဖြတ် လူမှောင်ခိုသယ်နည်း စစ်ဆင်ရေးဟာ ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ တဦးမှ အဖမ်းဆီးမခံရဘဲ သတင်း ၂ ပတ်အတွင်း ရဲဘော် ၂၄ ဦးစလုံး မင်းသမီးစခန်းအထိ ချောချောမောမော ပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ တဦးကတော့ ဘန်ကောက်မှာ သောင်တင်နေတုန်း ဒုက္ခသည်အဖြစ် လျှောက်လိုက်တဲ့အတွက် မင်းသမီးစခန်းဆီ ပြန်မလာတော့ပါ။
“ဘတ်စ်ကားစီးတဲ့ စစ်သည်တော်များ” လို့ နာမည်ကြီးသွားတဲ့ ရဲဘော် ၂၅ ဦး သယ်ယူမှု စစ်ဆင်ရေး အောင်မြင်သွားတဲ့သတင်းဟာ ကျနော်တို့ တပ်ရင်းဘေးက ကိုနိုင်အောင်တို့၊ ကိုမိုးသီးဇွန်တို့ တပ်ဖွဲ့တွေအတွက် အံသြစရာဖြစ်နေခဲ့သလို မာနယ်ပလောဝန်းကျင်ရှိ သက်ဆိုင်ရာ ဗဟိုအသီးသီး ကလည်း အတော်အံ့သြနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီခရီးစဉ်အတွက် ဘယ်အဖွဲ့ဆီကမှ အကူညီမရလို့ ကျနော်တို့ရဲ့ မာနယ်ပုလော စစ်ကြောင်းပိုင် Mizuho ဆက်သွယ်ရေးစက်ကို ရောင်းချပြီး အဲဒီကရတဲ့ ငွေတသောင်းကျော်နဲ့ လှေခ၊ ကားခ၊ စားစရိတ်အဖြစ် အသုံးပြုကာ အခုလို ပြန်လာနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပါ သူတို့သိရင် ပိုပြီးတောင် အံသြနေမလားလို့ ကျနော် စဉ်းစားနေမိပါတယ်။
စစ်ကြောင်းမှူး ကိုမင်းဇော်သူ (ရှေ့ဆုံးတန်း ၀ဲဘက်မှ စစ်ရောင်ယူနီဖောင်း ၀တ်ထားသူ) နဲ့ ၂၀၁ မှ တပ်စုကို မာနယ်ပလောမှ နော်တ ခံစစ်ကြောင်းသို့အသွား သောင်ရင်းမြစ်ထဲတွင် တွေ့ရစဉ်
ဒါပေမယ့် ၁၉၈၉ အစောပိုင်းတုန်းက ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ မဖွဲ့ဖြစ်လိုက်တဲ့ DAB စစ်ကြောင်းအတွက် မာနယ်ပလောစခန်းဆီ ရောက်ခဲ့ဖူးသူ ရဲဘော် ၂၀ ကျော်ထဲမှ တဦးကတော့ ၁၉၈၉ ကတည်းက ၂၀၁ ရဲဘော်တွေ အလားတူအဖြစ်မျိုးနဲ့ ကြုံခဲ့ဖူးပြီးဖြစ်တယ်လို့ ထောက်ပြပါတယ်။ အဲဒီတပ်စုကို မင်းသမီး-ဘုရားသုံးဆူ-၀ါလေ-မဲဆောက်ကနေ မာနယ်ပလော အထိ ချောချောမောမော သွားနိုင်အောင် DAB နဲ့ KNU က စီစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မာနယ်ပုလောကနေ မင်းသမီးစခန်းဆီ အပြန်ခရီးမှာတော့ ဘာမှ မစီစဉ်ပေးတော့ဘဲ “မဲဆောက်က ဒေါက်တာစင်သီယာမောင် ဆေးခန်းမှာ ကျနော်တို့တပ်စုကို ဒီအတိုင်းပစ်ထားခဲ့တယ်” လို့ အဲဒီကျောင်းသားက ပြောပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ အခု ကျနော်တို့ ဘက်မလိုက် အဖွဲ့ ၂၅ ဦး ပြန်လာသလိုပဲ ကိုယ်အစီစဉ်နဲ့ကိုယ် တောလမ်းတဆင့်၊ လိုင်းကားတဆင့် စီးပြီး ပြန်လာခဲ့ရဖူးတယ်လို့ သူကဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီဖြစ်ရပ်မျိုးတွေ ထပ်မဖြစ်အောင် တပ်ပေါင်းစုဖက်က အသေအချာ စီစဉ်ပေးသင့်တယ်ဆိုပြီး အဲဒီရဲဘော်က ဝေဖန်ထောက်ပြခဲ့တာကို ကျနော် အမှတ်ရနေပါတယ်။
ကိုတင်မြင့်ဦးတို့အကြောင်း အခုမှ ဓါတ်ပုံနဲ့ အချက်လက်ထပ်ရလို့ ထပ်ဖြည့်လိုက်ပါတယ်...
In early morning 5:30 AM of Thai Standard time on July 1st 1992,5soldiers of Burmese Army’s regiment 104, column No.2, had left their post and joined our ABSDF regiment 102 & 201 near Nat Eain Taung (Ban I Taung). They broughta60 MM Mortar and other arms & ammunitions along with them. They were Sergeant Tin Myint Oo (514525), Private Thwin Aung Myint (648059), Private Yin Thein (726540), Private Min Min (766789), and Private Htun Htun (796015).
— with Sergeant Tin Myint Oo and Private Min Min.